Xariirka Ardayda AAUA www.aaua.edu.ng/b/student/ Cusboonaysiinta Codsiga: Warka Dugsiga ee Hadda
Xariirka Ardayda AAUA: Awoodda Jaamacadda Adekunle Ajasin ayaa u suuragelisay bogga ardayga. Bogganina waa inuu u fududeeyo nashaadaadka tacliinta ardayda. AAUA waa dowlad goboleed ay iska leedahay oo maamusho jaamacad Nigeria ku taal.
Si kastaba ha noqotee, sii wad aqrinta qodobkaan si aad waxbadan uga barato. Laakiin marka hore, maxaad ka ogtahay Jaamacadda Adekunle Ajasin (AAUA)?
Sidoo kale, jaamacaddu waxay ku taal Akungba Akoko, Gobolka Ondo, Nigeria. Intaa waxaa sii dheer, waxay leeyihiin bar ay ardayda iyo xubnaha bulshada ka baran karaan wax badan oo ku saabsan dugsiga.
Jaamacadda Adekunle Ajasin?
Jaamacadda Adekunle Ajasin (AAUA) waxaa markii ugu horreysay loo aasaasay Jaamacadda Obafemi Awolowo bishii Maarso 1982 waxaana aasaasay dowladdii hore ee Gobolka Ondo, oo uu madax u ahaa marxuum Chief. Michael Adekunle Ajasin.
Si kastaba ha noqotee, dowladdii militariga ee si dhakhso leh u guuleysatay ee Navy Commodore Michael Bamidele Otiko waxay magaceeda u badashay Jaamacadda Ondo State University sanadkii 1985. U guurkeedii Akungba Akoko gobolka cusub ee Ondo wuxuu noqday mid lama huraan ah sanadkii 1999.
Hindise sharciyeedka taageeraya dib u dejinta waxaa saxiixay sharci ahaan Badhasaabkii Gobolka ee xilligaas, Chief Adebayo Adefarati, bishii Nofeembar 1999. Taasina waxay kalliftay dhaqaajinta dalag shaqaale ah oo ka yimid goobtii hore ee Ado-Ekitito Akungba Akoko 1dii Diseembar 1999.
Muhiimadda Xariirka Ardayda AAUA
Ardayga AAUA portal waxaa loo sameeyay ardaydii hore iyo kuwa mustaqbalka ee Jaamacadda. Sidoo kale, waa inay abuurto koonto ama gasho si loo fuliyo ficilada tacliimeed qaarkood ee sahlan. Tusaale:
Bixinta khidmadaha iskuulka.
Sidoo kale, hubinta natiijooyinka.
Intaa waxaa sii dheer, arjiga foomka gelitaanka.
Intaas waxaa sii dheer, hubinta shuruudaha gelitaanka.
Sidoo kale, hubinta mudada barnaamijyada.
Waxaa intaa dheer, soo dejinta warqadda gelitaanka iyo sida aad u xisaabin karto dhibcahaaga (GP & CGPA), iyo sidoo kale howlaha kale ee la xiriira waxbarashada.
Xariirka Ardayda AAUA
Bogga ardayda AAUA ee shahaadada koowaad (UTME / DE ardayda) habraaca bixinta khidmadaha aqbalaadda waad booqan kartaa http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.
Sidoo kale, bogga AAUA ee habka diiwaangelinta iyo bixinta khidmadaha aqbalaadda waad booqan kartaa http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/
Xariirka Ardayda AAUA ee Nidaamka Diiwaangelinta iyo Bixinta Khidmadaha Ogolaanshaha
Booqo http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.Oo waxaad tagtaa Xidhiidhada Degdega ah-> Xaaladda Ogolaanshaha-> Hubi Xaaladda Ogolaanshaha.
Si kastaba ha noqotee, murashax cusub oo aan lahayn xisaab, guji xiriirka "Abuur xisaab".
Sidoo kale, geli lambarkaaga diiwaangelinta UTME si aad u xaqiijiso inaad bixisay oo aad u xaqiijisay khidmadda aqbalaaddaada. Si kastaba ha noqotee, kuwa aan xaqiijin khidmadaha aqbalaadooda, dhagsii xiriirka "xaqiiji bixinta".
Intaas waxaa sii dheer, haddii xaqiijinta ku jirta (ii) kore ay guuleysato, waxaa laguu qaadi doonaa bogga abuurista koontada si loo abuuro koontadaada.
Sidoo kale, buuxi foomka sameynta koontada si habboon oo soo gudbi. Aqoonsigaaga soo-galidda waxaa isla markiiba loo diri doonaa taleefankaaga iyo cinwaanka emaylkaaga. Kadib waxaa lagugu hagaajin doonaa bogga galida si aad usii wado diiwaangelintaada.
Isticmaal lambarka taleefankaaga gaarka ah iyo cinwaanka iimaylkaaga. Maaddaama kuwan ay noqon doonaan marinkii aan kula soo xiriiri lahaa intaad Jaamacadda ku jirto.
Sidoo kale, ku soo gal magacaaga iyo isgarad furahaaga si aad u bilowdo diiwaangelintaada.
Foomamka Xogta waxaa loo qaybiyaa shan (5) qaybood. Fadlan si taxaddar leh oo habboon u buuxi.
Waxaa jira dukumiintiyo muhiim ah oo loogu baahan yahay soo dejinta si loo dhammaystiro diiwaangelintaada Waxay kala yihiin: Shahaadada dhalashada, shahaadada asalka, dhaarta maxkamadda (Ikhtiyaar) iyo warqadda caddeynta.
Sidoo kale, warqadda gelitaanka JAMB (ikhtiyaar), baasaboor iyo natiijada (yada) O'level. Musharixiinta gelitaanka tooska ah marka lagu daro, waxaa looga baahan yahay inay soo rogaan natiijadooda ND / NCE / IJMB. Si kastaba ha noqotee, kuwan oo dhan waa in lagu sawiraa qaabka sawirka JPEG.
Musharrixiinta aan lahayn warqad gelitaanka JAMB waa inay u soo sheegaan xafiiska gelitaanka Jaamacadda dib u bilaabista.
Kadib markaad dhammaystirto diiwaangelinta, ogow. Fadlan si taxaddar leh mar labaad u mari foomamka kahor intaadan gujin "Dhammeystirka gudbinta".
Guji "Dhameystirka soo gudbinta" si aad u buuxiso una soo gudbiso diiwaangelintaada. Horudhac ama bog warbixin ayaa la soo bandhigi doonaa.
Daabac bogga horudhaca oo hubi qoraalka baaritaanka ee ka hooseeya daabacaadda.
Ardayda ka gudubtay baaritaanka waxay usii gudbi karaan bangiga lacag bixinta iskuulka.
rasiidka etranzact ee bixinta khidmadda iskuulka ee laga helo bangiga waa muhiim. Waxaa loo isticmaali doonaa xaqiijinta bixinta khidmadda dugsiga iyo diiwaangelinta koorsada ee bogga.
Wixii su'aalo dheeraad ah iyo cabashooyin ah waa in loo diraa [emailka waa la ilaaliyay] Ama u soo sheeg nidaamka tikidhadayada http://eportal.aaua.edu.ng/ughelpdesk/
Xariirka Ardayda AAUA ee Shahaadada Jaamacadeed (UTME / De Ardayda) Nidaamka Bixinta Kharashaadka Lacagta
Hubi Xaaladdaada Ogolaanshaha adiga oo gujinaya badhanka Xaaladda Ogolaanshaha ee bogga soo degitaanka bogga. AMA bogga soo degitaanka aaua.edu.ng. Oo waxaad tagtaa Xidhiidhada Degdega ah-> Xaaladda Ogolaanshaha-> Hubi Xaaladda Ogolaanshaha
Sidoo kale, keen lambarkaaga Diiwaangelinta UTME / DE oo guji badhanka Gudbi. Si kastaba ha noqotee, haddii laguu oggolaaday oggolaansho, daaqad soo-bax ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa iyada oo leh farriin hambalyo ah.
Intaas waxaa sii dheer, booqo bangi kasta oo waddanka oo dhan kuugu dhow. Hesho iibiyaha oo buuxi iibiyaha sida lagu faray Tallaabada 2 ee kore.
Sidoo kale, u sheeg qasnajiga ama iibiyaha inaad rabto inaad ku bixiso lacag bixinta Adekunle Ajasin University, Akungba Acceptance fees eTranzact Platform.
Intaa waxaa sii dheer, ka dib bixinta, hubso inaad sugto oo aad soo qaadato eTranzact Payment Receit. Tani waa muhiim maadaama ay tahay marinkaaga inaad ku daabacdo warqaddaada gelitaanka.
Kadib markaad hesho risiitka lacag bixinta eTranzact, ogow. Mar labaad khadka tooska ah gal oo xaqiiji Lacagta Lacag Bixinta ee aad ku sameysay bangiga. Tani waa lagama maarmaan si loo hubiyo inaad tahay milkiilaha dhabta ah ee eTranzact Payment Receiit.
Si kastaba ha noqotee, si loo xaqiijiyo aqbalaadda, dhagsii Xiriirinta Deg-degga ah-> Lacag Bixinta Ogolaanshaha-> Xaqiiji Khidmadaha Ogolaanshaha.
Sidoo kale, bogga Xaqiijinta Khidmadaha Ogolaanshaha, xusuusnow. Waa inaad keentaa lacagtaada Diiwaangelinta UTME / DE Lambarka iyo Lambarka Amarka Xaqiijinta ee rasiidka eTranzact ee aad ka heshay bangiga. Ka dibna dhagsii badhanka Gudbi si aad u xaqiijiso bixinta lacag bixintaada.
Intaas waxaa sii dheer, markii aad ku guuleysato, xusuusnow. Waxaa laguu wareejin doonaa bogga aad ku daabacan karto warqaddaada ogolaanshaha.
Bogga Warqadda Ogolaanshaha, waxaad siisaa lambarkaaga Diiwaangelinta UTME / DE. Oo guji Gudbi si aad u aragto oo kuu daabacdo Waraaq Gelin Ku-meelgaar ah
Sida Looga Faa'iidaysto Adeegyada Rasmiga ah ee AAUA
Waa ku qasab ardayda oo dhan inay adeegsadaan emaylka rasmiga ah ee iyaga la siin doono ka dib xafladda qalinjabinta. Qaabka cinwaanka emaylka ayaa loo bixiyey sida xisaabta ardayda maya@ aaua.edu.ng, tusaale ahaan; [emailka waa la ilaaliyay].
Shahaadada kadib, tusaalaha kore ee cinwaanka rasmiga ah ee emaylka ayaa loo qoondeyn doonaa ardayda helay lambarkooda xisaabeed. (Xusuusin: - Emailkan rasmiga ah wuu ka duwan yahay emaylka la isticmaalay inta lagu gudajiro diiwaangelinta xogta-noolaha)
Sidoo kale, ardaydu waa inay galaan www.mail.aaua.edu.ng oo ay ku qoraan magaca adeegsigooda tusaale xisaabta ardayda [emailka waa la ilaaliyay] oo ay ku xigto lambarka sirta ah ee loo diro lambarka taleefanka ardayda ee loo soo diro SMS.
Intaa waxaa sii dheer, ka dib markaad gasho, waxaa lagaa doonayaa inaad ku bedesho erayga sirta ah lambarka sirta ah.
FG: E-maylka rasmiga ah ayaa loo isticmaali doonaa inta ardaydu ku sugan yihiin xerada illaa qalin-jabinta. Waxaa sidoo kale loo isticmaali lahaa meeleynta fasalka iyo ujeeddooyinka kale ee tacliinta la xiriira.
Sida Loo Helo Xariirka Khadka Caawinta Ardayda ee AAUA
Fadlan ka akhriso talaabooyinka soo socda si aad uga faa'iidaysato Adesga Caawinta AAUA: Tag www.aaua.freshdesk.com oo guji Gal.
Marka xigta waa inaad gujisaa 'login adoo adeegsanaya google'.
Sidoo kale, qor cinwaanka emaylkaaga rasmiga ah ee horey loogu abuuray adiga tusaale ahaan Lambarkaaga Mat ama [emailka waa la ilaaliyay] sida Username-kaaga oo ay ku xigto Password-kaaga. (Xusuusin: - Uma baahnid inaad isqorto)
Intaa waxaa sii dheer, ku dar oo soo gudbi tigidh cusub; sheegida codsigaaga / cabashadaada (Maamulaha ICTAC AAUA ayaa si dhaqso leh uga jawaabi doona codsigaaga).
Sidoo kale, booqo www.mail.aaua.edu.ng oo ku soo gal emaylkaaga rasmiga ah. Taasi waa Matric-kaaga No ama [emailka waa la ilaaliyay] sida Username-kaaga oo ay ku xigto Password-kaaga.
Kadib, hubi sanduuqaaga si aad uhesho lambarka isku xidhka tigidhada taageerada si aad ula socoto oo aad u ogaato xaaladda tigidhka aad horay u dhigtay
Marka dalabkaaga la daweeyo, waxaad heli doontaa warqad jawaab celin ah si taas la mid ah.
Uma baahnid inaad booqato ICTAC AAUA haddii uusan si kale u sheegin Maamulaha jawaabta tigidhkaaga. Sidoo kale, ardayda iska diiwaangelisa ama ku soo gala cinwaan kale oo emayl ah oo aan ka ahayn cinwaanka rasmiga ah ee AAUA ee iyaga la siiyay waa la tuurayaa).
Habka Bixinta Lacagta Dugsiga Hoose (Ardayda Soo Noqota)
Dhammaan ardayda soo noqonaysa waa inay eegaan oo daabacaan Qaan-sheegashada Lacagta Iskuulka si ay u ogaadaan inta ay bixinayaan iyo sida loo buuxiyo iibiyaha oo lacagta looga bixiyo bangiga.
Si aad u aragto / u daabacdo qaansheegadka bixinta khidmadda dugsiga, bogga soo degitaanka bogga, u tag Xiriirrada Deg-degga ah-> Daabac Qaan-sheegashada Kharashka Dugsiga-> Daabac Qaan-celinta Lacagta Dugsiga
Si kastaba ha noqotee, qadka daabacaadda Khidmadaha Lacagta ee Iskuulka, waxaad siisaa lambarkaaga Matric Haddii laga helo dejinta bixinta khidmadda dugsiga, ka dib qaansheegta bixinta khidmadda dugsiga ayaa loo soo bandhigayaa si loo daawado loona daabaco. Haddii aan la helin, waxay ka dhigan tahay inaadan waxba ka bixin karin bangiga.
Sidoo kale, fadlan la xiriir waaxda ICTAC ee hay'adda oo diiwaan geli cabashooyinkaaga. Xaaladdan oo kale, waxaan dooneynaa inaan ku aragno adiga shakhsi ahaan si aad u xalliso arrinta waxaadna awoodi doontaa inaad fiiriso qaansheegtadaada oo aad bixiso khidmadaha iskuulka.
Booqo bangi kasta oo waddanka oo dhan kuugu dhow. Hesho iibiyaha oo buuxi iibiyaha sida lagu faray Tallaabada 2 ee kore.
Sidoo kale, u sheeg qasnajiga ama iibiyaha inaad rabto inaad lacag ku bixiso Jaamacadda Adekunle Ajasin, Khidmadaha Iskuulka Akungba ee ku yaal eTranzact Platform. Bixinta ka dib, hubi inaad sugto oo aad soo qaadato eTranzact Payment Receiit.
Habka Bixinta Kharashka Dugsiga Hoose (Ardayda Soo Noqota): Talaabooyin Dheeraad ah
Kadib markaad hesho risiidhka lacag bixinta eTranzact, mar kale gal khadka tooska ah oo xaqiiji Lacagta Khidmadaha Dugsiga ee aad ku samaysay bangiga. Si kastaba ha noqotee, si loo xaqiijiyo khidmadaha iskuulka, dhagsii Xiriirinta Deg-degga ah-> Lacagta Kharashka Dugsiga-> Xaqiiji Kharashka Iskuulka.
Sidoo kale, bogga Xaqiijinta Khidmadaha Dugsiga, Sii Nambarkaaga Matric iyo Lambarka Amarka Xaqiijinta ee rasiidka eTranzact Payment ee aad ka heshay bangiga oo guji badhanka Gudbi si aad u xaqiijiso bixinta khidmadaha dugsiga.
Intaa waxaa sii dheer, markii aad guuleysato, waxaa laguu wareejin doonaa bogga aad ka gali karto koontadaada.
Markaad gasho boggaaga koontada, haddii aad horay u samaysatay koonto, ku soo gal magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah laakiin hore uma lihid xisaab, dhagsii xiriiriyaha "Abuur xisaab".
Sidoo kale, hubi bixinta khidmadaha Iskuulka ayaa lasoo bandhigi doonaa. Keen lambarkaaga Matric oo dhagsii badhanka Gudbi.
Haddii aad horay u xaqiijisay lacag bixinta khidmadaada dugsiga, ka dib waxaa laguu oggolaan doonaa inaad sameysato Akoon iyo SMS ka mid ah aqoonsigaaga soo galida. Fadlan hubi inta lagu jiro abuuritaanka koontada, inaad bixiso nambarka taleefanka gacanta ee shaqeynaya iyo cinwaanka emaylka.
Ku soo gal koontadaada magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah oo buuxi dhammaan foomamka lagama maarmaanka ah sida ku habboon oo u soo gudbi.
Waxyaabaha kor ku xusan ayaa kugu filan inay kaa caawiyaan inaad gasho Xariirka Ardayda AAUA. Hubso inaad la wadaagto asxaabta.
Eeg Nidaamka Looga Iibsanayo Baabuur Biljamka Cotonou sanadka 2020
Tirada Orrix & Qorista Dhismaha 2017 | Sida loo Codsado Orrix Reatly & Dhismaha Shaqaaleynta
EKSU Qaybta-Waqtiga Ogolaanshaha 2016/17, U-qalmitaanka iyo Faahfaahinta Diiwaangelintu way banaantahay
Qorista Kooxda Koowaad ee Koowaad 2017 | Tilmaamaha Codsiga iyo Shuruudaha
Shaqaalaynta qorista Nigerian Breweries Plc ee Nidaamka iyo Maareeyaha Horumarinta Xakamaynta
JAMB Xaaladda Ogolaanshaha 2021 Xariirka loogu talagalay Hubinta Tooska ah ee Shaqeysa
Tags: aaua portal, aaua portal ardayga shahaadada koowaad, sida looga faa'iideysto bogga ardayda, muhiimada ay leedahay bogga ardayda eeua
« Qorista PricewaterhouseCooper ee Madaxa, Qorista Ganacsiga 2021
Hada Ka Codso Qorista Socda ee PricewaterhouseCooper (PwC) 2021 Cusboonaysiinta »